बलेवामा जहाजः गुम्यो अवसर::Online News Portal from State No. 4
बलेवामा जहाजः गुम्यो अवसर
नेपाली एउटा उखान छ– ‘नक्कली केटीको १२ वटा पोइ मर्ने बेलामा कोही न कोही’ भनेझै बागलुङको बलेवा एअरपोर्टमा यतिबेला हवाईजहाज आउन छोडेपछि मलाई यहीँ पुरानो नेपाली उखान झल्झली याद आयो । मैले माथिको उखान अहिले पनि समय सान्दर्भिक भएको हुनाले यहाँ सापटी लिएको हो । यसलाई अन्यथा नबुझ्नु हुन सबै पाठक वर्गमा अनुरोध छ ।
बागलुङ जिल्लामा २६ बर्षदेखि बन्द रहेको बलेवा एअरपोर्टमा बल्लतल्ल काठमाडौंबाट हप्ताको दुई फ्लाइट हवाईजहाजले आफ्नो सेवा दिन शुरू गरेपछि यो जहाज मैले ल्याएको हो भनेर जस लिन हानथाप नै चल्यो । जिल्लाका एकसे एक बरिष्ठहरूले सामाजिक संजालका वाल भरेर आफ्नो बखान गर्दै फोटो मात्रै हालेनन् भन्नुपर्ने सबै कुरा भनेको मलाई हिजो जस्तो लाग्छ । अहिले पनि बलेवा हवाई मैदानमा गरेको भाषण कानमा गुन्जीरहेको छ ।
साँच्चै २ दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवामा एकाएक हवाईजहाज आउँदा जिल्लाबासी सबै खुशी भएका थिए । बागलुङ नगरपालिकाले नेपाल एयरलाइन्स र तारा एयरलाइन्ससंग लिखित रूपमा १२÷१२ जना यात्रुको भार ब्यहोर्न तयार भएपछि काठमाडौ बागलुङ हवाई सेवा शुरूवात भएको तथ्य सबै सामु छर्लङ्गनै छ । बागलुङ नगरपालिकाले जुन काम ग¥यो त्यसलाई केहीले सकारात्मक काम भनेर प्रशंसा गरेभने कतिपयले यसलाई नकारात्मक रूपमै टिप्पणी गरे, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । अहिले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफुलाई लागेको कुरा स्पष्टसंग भन्न पाउँछ यो नागरिक अधिकारको कुरा हो ।
काठमाडौदेखि बागलुङ सम्मको हवाई भाडा महंगो भएको भनेर पनि यसको आलोचना नभएको हैन । साँच्चै यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू थिए । भाडा समायोजन गर्नुपर्ने कुरा पनि नभएको हैन । बागलुङमा सकारात्मक बिषयमा बहस गर्नुपर्ने थियो । साँच्चै केही भाडा सस्तो भएको भए हवाईजहाज नियमित रूपमा चल्ने थियोे । बागलुङ जिल्लामा हवाईजहाज आउँदा बागलुङ जिल्लाबासीको इज्जत पनि बढेको थियोे । अहिले फेरि एकाएक हवाईजहाज आउन छोडेपछि एकथरी मान्छे खुशी भएका छन्, हो हामीले संभव छैन भनेर भनेको हो त्यो कुरा पुरा भयो । साँच्चै भन्ने होभने बागलुङ बजारदेखि बलेवासम्म जान आउन सडक नै प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको थियोे । किनभने त्यहाँ सम्म पुग्ने सडकको कारण पनि हवाई जहाज चढ्न जान यात्रुले असुबिधा महसुस गरेका थिए । सडक कालोपत्रे भएको भए धेरै सहज हुने थियो । केही कमीकजोरीको बाबजुद पनि हवाईजहाज आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिदै भएको कमीकमजोरीलाई सच्याउन सकेको भए यसले जिल्लालाई फाइदा पु¥याउने थियो । पर्यटनको क्षेत्रमा समेत यसले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने थियो । बागलुङको बलेवा एकपटक फेरि जागेको थियोे । २६ बर्षपछि जुन उत्साह उमंग आएको थियो, जहाज आउँदा फेरि एक बर्ष नबित्दै बलेवामा जहाज आउन छोडेपछि निराशा छाएको छ ।
बागलुङको बलेवाबासीले पनि यो बिषयमा चासो लिएर जसरी भएपनि यो एअरपोर्ट चलाउन प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्ने थियोे। त्यो खेलेको देखिएन । नगरपालिकाले कमजोरी गरेको हतारमा विमान चलाएको भनेर अहिले सबै उम्कने प्रयास गरेका छन् । साँच्चै बागलुङ नगरपालिकाले कमजोरी छैन भनेर भनेको हैन कतिपय सवालमा कमजोरी देखिएका थिए त्यसलाई सच्याउन सकिने ठाउँ थियोे । सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक रूपमै हल गर्नुपर्नेमा नकारात्मक टिप्पणी बढी भएको हो कि भनेर पनि हामीले मुल्यांकन गर्न जरुरी छ । अहिलेसम्म बागलुङ काठमाडौ हवाई सेवा संचालन गर्दा कति यात्रु बोकिए नगरपालिकाले नेपाल एयरलाइन्स र तारा एयरलाइन्सलाई कति रकम भुक्तानी गर्या भन्ने कुरा बागलुङ नगरबासीलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने जुन कुरा आवाज उठिरहेको छ । यसलाई सकारात्मक मानेर जवाफ दिनुपर्छ ।
राम्रो भए सबै हामीले गरेको, मैले गरेको भनेर हानथाप गर्ने महोदयहरू आज बलेवामा विमान नआएपछि तै चुप मै चुप छन् । अहिले यिनीहरूको भाखा फेरिएको छ, स्वर फेरिएको छ । हिजो मैले के बोलेको थिए भन्ने कुरा समेत यिनीहरूले भुलिसकेका छन् । साँच्चै भन्ने हो अचम्म खालको संस्कृति छ । हामी र हाम्रो नेताहरूमा यहीँ खालको संस्कृतिको कारण हामी पछि परेका हौ भन्ने कुरा जबसम्म महसुस गर्न सक्दैनौं तबसम्म हामीले न त आफ्नो विकास गर्न सक्छौ न त आफ्नो ठाउँ कै विकास यो संभव छैन । साँच्चै बागलुङका जनताले आफै कुटो कोदालो, गैची र बेल्चाले खनेर तयार पारेको बलेवा बिमानस्थलको आफ्नो छुट्टै इतिहास छ । यसलाई अहिले बिर्सेका हुन कि आफ्नो ठाउँ जगाउन आफ्नो ठाउँ चलाउन यहीँका मान्छे नजागेसम्म यहाँको बिकास संभव छैन । मान्छेलाई अहिले सबैभन्दा सुरक्षित यात्रा हवाई यातायात भएको छ, आफ्नै घर आँगनबाट हवाईजहाज चढ्न पाउनु पनि एउटा सान हो । अहिले जसरी पोखरामा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रीय बिमानस्थल बनाउन पोखराबासी लागिरहेका छन्, यो आफ्नो ठाउँको बिकासको लागि हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । हामीले अहिले चलिरहेको हवाई सेवा समेत आफ्नै इगोको लागि बन्द गराउन मलजल गरेपछि कहाँबाट बिकास हुन्छ । काठमाडौबाट सिधै बागलुङमा गर्न सकिने यात्रालाई हामीले निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।
अहिले देशमा इतिहासकै शक्तिशाली सरकार छ, नेपाली जनतालाई केही राहत दिन्छु, देशमा बिकास गर्छु भनेर कसम खाएको सरकारलाई काठमाडौ–बागलुङ, जोमसोम–बागलुङ नियमित हवाई सेवा सरकारकै सहयोग र पहलमा चलाउने काम गर्ने प्रयास पनि गर्न सकिन्थ्थो यो कुरामा पनि हाम्रो नेतृत्व चुकेको हो कि ? सरकारले सन् २०२० मा नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्राउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, नेपाल आउने २० लाख पर्यटकलाई काठमाडौ, पोखरा, लुम्बिनी, जोमसोम र लुक्ला मात्रै घुमाउने हो कि बागलुङ लगायतका ठाउँमा पनि घुमाउने हो पहिला त्यो कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । साँच्चिकै हाम्रो बलेवा विमानस्थल नियमित संचालन भएको खण्डमा यसले सन् २०२० को पर्यटन बर्षलाई पनि सहयोग पु¥याउने निश्चित देखिन्छ । बागलुङ जिल्लामा पनि हजारौं पर्यटक भित्राउन सकिने थियो,े यसले जिल्लाको समृद्धिलाई पनि सहयोग पु¥याउने थियोे ।
बागलुङ जिल्लालाई साँच्चै राम्रो बनाउने होभने सबै एकजुट हुनुको बिकल्प छैन । किनभने आखिर बागलुङलाई राम्रो बनाउने बागलुङेहरूले नै हो अहिले एकले अर्काको बिरोध गर्नुभन्दा एक आपसमा नकारात्मक कामको बिरोध, सकारात्मक कामको समर्थन गरेर जाने होभने मात्रै राम्रो हुन्छ । अहिले फेरि २६ बर्षदेखि बन्द भएर चलेको हवाईजहाजलाई बन्द गराउँदा नगरपालिकालाई केही राहत त अबश्य पनि मिल्छ तर यसले जिल्लामा आएको एउटा अबसर चाही गुमेको छ । भएको कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने काम गरे सुनमा सुगन्ध हुने थियोे ।